Ethereal Network Analyzer — MYSTERY ZILLION
ကျနော် Ethereal Network Analyzer ကိုဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာကို သိချင်လို့ပါ..။
Ethereal Network Analyzer အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြပေးပါအုန်းနော်....။
Ethereal Network Analyzer ကိုဘယ်လို setting လုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးပါ ကူညီပေးကြပါအုနး်နော်...။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး.. ဒီထက်မက ပညာတွေ တိုးပွားသိရှိနိုင်ကြပါစေ..။
Before you use the analyzer, you should know which layer you want to analyze.
You may need to choose correct device to scan for which protocol and message. ( like L2 switch, Router, Firewall ) I suggest you to scan on firewall but its up to you for what the issue you are facing.